Wararkii ugu danbeeyay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Sabti, Feberaayo, 9, 2019 (HNN)- Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa sheegay in duqeymo ay ka geysteen 48-diii saac ee la soo dhaafay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ay ku dileen 15 ka tirsan ururka Al-shabaab.
Dhanka kale, sarkaalka ugu sareeya ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeymaha Mareykanka oo kaliya aaney guulo ka soo hoyin karin dagaalka lagula jiro al-Shabaab haddii ciidamada Soomaaliya aysan door lixaad leh ka qaadan.
Madaxda Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika Gen.Thomas Waldhauser oo shalay la hadlayay guddiga Aqalka Senat-ka Mareykanka ee arimaha gaashaandhigga ayaa yiri “Duqeymahan ma aha kuwa marka ugu dambeysa ka adkaan kara al-Shabaab. Halka ugu dambeysa ee ay howsha u taalo waa ciidanka qaran ee Soomaaliya oo looga baahan yahay inuu xoogeysto uu kordhiyo dadaalladiisa oo uu qaato masuuliyadda ka saaran amaanka dalkooda.”
Illaa iyo horaantii sanadkii 2017-dii, Mareykanki waxa uu kordhiyay tirada duqeymaha uu ka geysto Soomaaliya.
Duqeymihii ugu dambeeyay ayeey ka filyeen gobolada Jubada Dhexe iyo Hiiraan kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan boqol al-Shaabab ka tirsan.
Wararkii ugu danbeeyay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya added by admin on 09/02/2019